Anodhura CRM Solution | CRM kune Bhizinesi rako | Inodhura uye Yakanakira Bhizinesi Diki uye Bhizinesi Huru.
CRM SOLUTIONS kune vatengi vedu
Inodhura uye Yakanyanya CRM Solutions
Zvese zvinodaidzwa munzvimbo imwechete
Kutarisa kwemaawa makumi maviri nemana
Automated kupindura uye kuongorora
Yedu Solutions Inosanganisira
Pahwaro hwekambani yako yekugadzirwa uye zvinodiwa tinopa CRM Solution Package uye panguva imwechete isu tinopawo CRM Solutions yakagadziridzwa, zvakare.
Zvikwata zvako zvinokwanisa kugadzira nzvimbo yebasa neruzivo rwese rwunowanikwa. Ivo vanogona kuzvigadzirira basa ivo pachavo kana vamwe. Mamaneja achave nekuwana kwemishumo yematanho ese.
Chikwata chako uye vatengi vachakwanisa kutaurirana kuburikidza neemail asi vachakwanisawo kutaura kuburikidza neakanakisa Midhiya midhiya. Zvese panzvimbo imwe.
Kambani Chat, Chatbots & Vhidhiyo mafoni
Iwe uchave unokwanisa kugadzira chiteshi, mapoka uye chatbots anoita kuti kudyidzana mukati mekambani uye pamwe nevatengi vako.
Iwe unogona kuve nemagwaro kunzvimbo imwechete kuitira kuti anowanikwa pakati pechikwata chako uye zvakare anogona kugoverwa nekudzvanya bhatani kune vatengi vako.
Kwekuchengetedza faira, Kugadzirisa & Management
Negore mhinduro iwe uchave nemukana wekusekesa uye chengetedza mafaera ako pane yakachengeteka yegore nzvimbo. Kugadziriswa kunogona kupihwa mukati mezvako zvigadzirwa uye zvakare kuburikidza neyekunze kwegore hosting solution.
Karenda & Kuronga
Zvese mune imwechete system. Iyo inogona kumira yega kana kuburikidza neGoogle Calendar kana Microsoft Outlook.
CRM inogona kuve yakabatanidzwa neGoogle Mail, Microsoft Exchange kana chero SMTP kana POP email server, iyo inoshandurwa kuita Lead muCRM.
Kubata Center Solution
Yakawandisa CRM package yeInternet Centers iyo yakakodzera kune hukama manejimendi uye dhipatimendi rekutengesa rubatsiro. Gadzira mishumo, yekutengesa mafirandi, invoicing, tikiti rekugadzira uye zvimwe zvakawanda.
VOIP Foni services uye PBX
Zvinobuda uye zvinopinda zvinoda kufona kubva kudesktop yako kana kuburikidza neSIP-foni kana yako runhare. Unogona kuita runhare rwekunze kuenda kunharembozha kana tambo dzepasi pasirese pamutengo wakaderera.
Zvishandiso zvakasiyana-siyana zvekutsigira rako Dhipatimendi reVashandi, nezvizhinji zvezvinhu zvinoshanda se; Kuenda, kukumbira uye kupihwa mashizha, mari yekubvisa, kuverenga kwemihoro kutumidza vashoma.
CRM Solution inogona kusanganiswa zvakananga newebhusaiti yako yekutsigirwa kwevatengi uye kutungamira chizvarwa.
Quotes uye Invoice Chizvarwa
Iwe nechikwata chako munokwanisa kuburitsa maQuote nema invoice zvakananga kuburikidza neCRM yako, iyo inoita kuti hupenyu huve nyore zvikuru kana uchienzaniswa nehurongwa hwetsika.
Une rusununguko rwekupa wakasimba Mutengi rubatsiro system kune mutengi wako ane chinzvimbo kunyora uye kurekodha vatengi kushandira zvikumbiro uye mhinduro pasina kunetsekana.